कार वोक्सवैगन पोलो सेडान, समीक्षा मौलिक नयाँ शैली को उद्भव संकेत जो, को सुरुचिपूर्ण र चिकना डिजाइन embodies। स्पष्टता, सरलता र शान संग शरीर प्रत्येक लाइन को कार्यान्वयन मोडेल को भव्यता र expressiveness सुझाव।
कार पोलो सेडान, समीक्षा जो आफ्नो सुविधा र उल्लेखनीय क्षमता कुरा, प्रभावशाली विकल्प संग कार को आफ्नो वर्ग लागि छ। यो वाहन को लम्बाइ - 4.384, चौडाइ - 1.699 र 1.465 को उचाइ ठूलो आधार पाङ्ग्राहरू, constituting 2.552 m कार स्थिर र आन्दोलन समयमा पूर्ण नियन्त्रण बनाउने हूँ .. वाहन विकल्पहरू ड्राइभर र सबै यात्रु दुवै को सुविधा संग यात्रा गर्न अनुमति दिन्छ।
पोलो सेडान कार, समीक्षाएँ जो विशेष रूस लागि डिजाइन निर्माता को इतिहास मा पहिलो पटक आफ्नो कम लागत प्रमाण। नयाँ मोडेल 2010 को वसन्त मा प्रदर्शनमा राख्न थियो, र विधानसभा यो कालुगा मा प्रबन्ध मिलाइयो।
कार वोक्सवैगन पोलो, एउटै श्रृंखला hatchback को मिसिन यसको समानता पुष्टि समीक्षा जो, एक फरक बम्पर छ। डिजाइन विपरीत हेडलाइट्स र जंगला को आकृति देख्न सकिन्छ।
को भित्री पोलो सेडान लागि सामाग्री, समीक्षा को शोषण यसको उच्च वेयर प्रतिरोध द्वारा विशेषता छ, कम लागत प्लास्टिक तंग छ। चार सय साठी लिटर छ जो सामान कक्ष, वृद्धि गर्न, यो सिट को दोस्रो पङ्क्ति फिर्ता गुना गर्न सम्भव छ।
जब तपाईं उपकरण को एक न्यूनतम सेट प्रयोग गरेर कार को आधारभूत संस्करण पूरा गर्नुहोस्। Rims chetyrnadtsatidyuymovy embodiment stamped छन्। Comfortline श्रृंखला सेट गरम सिट र प्रथम लाइन विरोधी-लक संग सुसज्जित छ। विशिष्ट आधारभूत संस्करण Highline अडियो सिस्टम र वातानुकूलन सुसज्जित। यस कार परिमार्जन सुरक्षा, को लागि पक्ष airbags प्रदान पार्किङ सेन्सर, जलवायु नियन्त्रण, ESP सिस्टम विनिमय दर स्थिरता लागि जिम्मेवार, साथै हल्का-मिश्र धातु आकार मा पाङ्ग्रा पन्ध्र इन्च गर्न।
रूसी मोटर चालकहरुलाई मिसिन सकारात्मक समीक्षा पनि जितेको छ। वोक्सवैगन पोलो सेडान पूरा Galvanization संग एक शरीर छ। यो संरचनात्मक भाग रूस एक जलवायु मा मिसिन सञ्चालन लागि प्रदान गरिएको छ। 1.7 मीटर को एक प्रबलित निलम्बन र जमीन अवकास संग, कार सजिलै रूसी सडक मा उत्प्रेरित गर्छ। मोडेल एक पेट्रोल इन्जिन संग सुसज्जित छ। यो 1.6 लिटर एक विस्थापन र एक सय र पाँच अश्वशक्ति को उत्पादन भएको छ। वाहन एक पाँच-चरण संग सज्जित छ समावेश हुन सक्छ मार्गदर्शन गियरबक्सलाई, को मार्गदर्शन मोडमा एक सिरियल पारी समारोह भइरहेको, साथै एक छ-गति स्वचालित प्रसारण।
वोक्सवैगन पोलो उत्पादन कम्पनी LLC "वोक्सवैगन समूह रस", औद्योगिक क्षेत्र Grabtsevo मा कालुगा को शहर नजिकै स्थित मा बाहिर छ।
कारण यसको स्टाइलिश उपस्थिति, विशाल सहज भित्री, साथै उचित मूल्य रूसी बजार मा मोडेल को लोकप्रियता। साथै, आधुनिक उत्पादन उपकरण र उच्च गठन गुणस्तर धन्यवाद, यो मोडेल विदेश भेला कार फरक कुनै छ। शरीर प्यानल बीच अंतराल को खुसी एकरूपता, साथै सबै विवरण दुवै बाहिर र वाहन भित्र ठूलो फिट।
अन्य निर्माताहरु देखि वोक्सवैगन पोलो sedans बजेट श्रृंखला को एक विशिष्ट सुविधा सामान खण्ड धेरै मधुर स्वर प्रविष्ट छ भन्ने छ। एकै समयमा, आफ्नो प्रभावशाली शरीर को सबै कार्गो यातायात लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। बाटोमा आवश्यक उपकरण सेट, साथै चिन्ह आपतकालीन स्टप संकेत, को स्पेयर पाङ्ग्रा साथ सँगै भण्डारण गर्न सकिन्छ।
पर्याप्त ठोस र सन्तुलित कार - यसको वर्ग सेडान वोक्सवैगन पोलो लागि। यसको उत्पादन को शुरुवात किफायती को आगमन चिन्ह लगाइएको र पूर्ण रूसी कार मा सञ्चालन अवस्था अनुकूल।
समय बेल्ट गेट्स: समीक्षा। छनौट मा गुणवत्ता, सल्लाह: गेट्स (बेल्ट timing)
म एक कार ब्याट्री कसरी चार्ज गर्छन्? यो सरल र किफायती
किन गाडीको Windows पसिना? कार सञ्झ्यालमा डराएको - के?
जूता, जूता, टखने जूता: हरे जूता लगाउन के बाट
दबाइ "Resorcinol": प्रयोगको लागि निर्देशन
भिटामिन "Complivit रोशनी": समीक्षा।
"कसरी सानो टट्टू मई" आकर्षित गर्न? आउनुहोस् केही तरिकाहरू विचार गरौं
तपाईं गर्भावस्था को समयमा कपाल काट्न कि सत्य
चाड बीच4* (सनी बीच, बुल्गेरिया)। चाड बीच 4: * समीक्षा
इस्पात को विभिन्न प्रकार के हो। प्रतीक को व्याख्या
कारण, अल्सर 12 ग्रहणी अल्सर को लक्षण, उपचार विधि
पहुँच के हो? Microsoft Access मा डाटाबेस सिर्जना गर्दै
पूंजीवाद को देश resettlement: मुख्य विशेषताहरु र उदाहरण